Abbaan manaa kiyya hammaa oli na jaalata sababa jedhuun dubartii hiikka gaafatte – Fana Broadcasting Corporate
Abbaan manaa kiyya hammaa oli na jaalata sababa jedhuun dubartii hiikka gaafatte
Finfinnee, Hagayya 20,2011 (FBC) – Eemiiretoota Arabaa Gamtoomanitti abbaan manaa kiyya hammaa oli na jaalata sababa jedhuun dubartiin hiikkaa raawwachuuf mana murtitti dhiyaate baayyota ajaa’ibsiifte.
Warren bultii ijaarataan jiddutti jreenyaa bareedaa fi gammachuu qabu akka jiraatuuf wal jaalachuu fi waliif yaaduun barbaachisadha.
Haata’utii nama ta’e kan hin dogoggorree waan hin jirreef jirenya keessatti rakkinoonni garaagaraa uumamuu danda’u.
Jireenya keessatti waliigaluun yoo hin dandeenye mariidhaan furatu, yoo dadhabame ammo jaarsa biyyattiin ilaalatu. Kanarra kan darbe gara mana murtii deemuun waliigaltee gaa’ila isaanii diiguun hiikkaa raawwatu.
Torbee kana ammo oduun gara Eemiireetoota Arabaa Gamtoomanii dhaga’amu ammoo kana irraa adda
“ Abbaan manaa kiyya hammaa ol na jaalata.” sababa jedhuun dubartiin hiikkaa raawwachuuf mana muriitti dhiyaachuun ishii oduu ajaa’iba ta’eera.
Mana murtiitti dhiyaachuun “ Erga buultii ijaarannee waggaa tokko guuteera, garuu guyyaa tokko natti dheekkamee hin beeku, naan hin mormu, waan ani jedhuun mara ni raawwata, kunuun hammaan ol ta’e waan jaalalaaf ta’u na dhorkateera.” jechuun komii ishee abbootii murtii hubachiifteetti.
Kana waan ta’eef mana murtii raawwii hiikkaa akka naaf raawwatu jechuun gaafateetti.
Ta’ichatti kan rifate abbaan mana dubartii kana waan haati mana isaa ibsite kana hunda kanaan taasiseef isheef abbaa manaa gaarii ta’uu fi jireenyi keenyi gara fuulduraa bareeda akka ta’uuf jedheen jechuun abbaa murtitti yaada isaa ibsateera.
Haata’utii dubartiin kun haala isheen dhimmoota kana ilaalte dogoggora waan ta’eef mana murtii himata ishee kufaa taasiseera.
Abbootiin murtii mormii isaani dhaggeefatan rakkina isaan gidduutti uumame mariin akka furaatan hubachiisuun gaggeesera.
Maddi :- Oodiit Sentiraal
Asallaatti Daandiilee fi Addababaayyiiwwan Maqaa Namoota seenaa Boonsaa hojjataniin…
Abu Daabiin, Dr Abiy Noobeelii injifachuu isaanitiin gammachuushee ibsatteetti
Namtichi nyaata dhiyyaateef keessatti rifeensa arguun rifeensa haadha warraasa haade…
Gurraachi Lammii Ameerikaa dhaddacha irratti nama obboleessa isaa ajjeese dhiifama…